လေ့ကျင့်ခန်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကိုမည်သို့တိုက်ဖျက်နိုင်မည်နည်း (Your Brain On Porn) (၂၀၁၈)
အနှစ်ချုပ် - စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသတိတရရှိရှိခေါ်ဆိုခြင်းသည်တွန်းလှန်ရန်ခဲယဉ်းပြီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများယခင်ကသောက်ခဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြန်သွားခြင်းသည်ခုခံနိုင်စွမ်းကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သောစွဲသူများသည်ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိခိုက်လွယ်မှုနည်းပါးပုံရသည်။ ယခုအခါကြွက်နှင့်သုတေသနပြုမှုကလေ့ကျင့်ခန်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ peptides ထုတ်လုပ်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုအားကောင်းစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဥာဏ်စမ်းခေါ်ဆိုမှုကိုတွန်းလှန်ရန်ခဲယဉ်းပြီး၊ ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲခဲ့သည့်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြန်သွားခြင်းသည်ခုခံနိုင်စွမ်းကိုများစွာပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သောစွဲသူများသည်ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိခိုက်လွယ်မှုနည်းပါးပုံရသည်။ ယခုအခါကြွက်နှင့်သုတေသနပြုမှုကလေ့ကျင့်ခန်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ peptides ထုတ်လုပ်မှုကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုအားကောင်းစေလိမ့်မည်ဟုဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ACS အိုမီဂါ.
re-ထိတွေ့ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ရှိရာနေရာအဖြစ်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမှ, သူတို့ကခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး paraphernalia ခဲ့ကြသည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတွေတောင်မှ relapse မှမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ မတိုင်မီကလေ့လာမှုများလေ့ကျင့်ခန်းတဏှာနှင့် relapse စွဲများတွင်အဖြစ်ကြွက်တွေကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ယင်းယန္တရားမသိခဲ့ပေမယ့်, လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်နိုင်သည်ဦးနှောက်ထဲမှာ peptides ၏အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာအသုံးပြုပုံမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးယူပြီး၏အကြိုးအာရုံအကြားသင်ယူအသင်းအဖွဲ့ပြောင်းလဲပစ်ရန်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ Urbana-Champaign ကမှာအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်ကယောနသန်သည် Sweedler, Justin Rhodes နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကြွက်များတွင်ဤ peptide အပြောင်းအလဲများကို quantifying အားဖြင့်ဤသီအိုရီကိုစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကြွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးအသင်းအဖွဲ့ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကြမ်းပြင် texture နှင့်အတူအထူးအခန်းလေးရက်ကျော်ကင်းထိုးပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်ပြေးဘီးပါဝင်သည်အချို့သောအိတ်များအတွက် 30 ရက်များအတွက်သျောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများသည်ဤဘီးအပေါ်ကျင့်သုံးကြောင်းကြွက် myelin နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက် peptides, အရပျ၌အမှတ်တရများကို fix ကိုကူညီထင်သောပစ္စည်းဥစ္စာ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ re-ထိတွေ့မှုကွဲပြားခြားနားပြေးများနှင့်အထိုင်များကြွက်ထိခိုက်သည့်ကိုကင်း-ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို: အထိုင်များကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်, running ဘီးနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်တို့သည်ကင်း-ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလျော့ချ preference ကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Re-ထိတွေ့ပြေးသမား၏ဦးနှောက်ဦးနှောက်ထဲမှာဆဲလ်အချက်ပြပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်အချို့သောဟေမိုဂလိုဘင်-ဆင်းသက်လာ peptides ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ပါရှိသော။ ဤအတောအတွင်း actin ကနေဆင်းသက်လာ peptides Re-ထိတွေ့အထိုင်များကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ actin သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်မူးယစ်ဆေးရှာထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ အဆိုပါသုတေသီများ peptide အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်သောသည်ဤတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့် relapse များအတွက် biomarkers ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါမည်ဟုဆိုသည်။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကပံ့ပိုး အမေရိကန်ဓာတုလူ့အဖွဲ့အစည်း. မှတ်ချက်: အကြောင်းအရာစတိုင်နဲ့အရှည်အဘို့အ edited နိုင်ပါသည်။
စာရာကိုအီး Dowd, မာတီအယ်လ် Mustroph, အယ်လီနာ V. Romanova, ဘရုစ် R. Southey, Heinrich Pinardo, Justin အက်စ် Rhodes, ယောနသန်သည် V. Sweedler ။ ဘက်စုံ Mass Spectrometry အားဖြင့်ကြွက်တွေအတွက် Exercise- နှင့်ဆက်စပ်-သွေးဆောင် Peptide အပြောင်းအလဲများ Exploring. ACS အိုမီဂါ, 2018;3(10): 13817 Doi: 10.1021 / acsomega.8b01713